လေဖြတ်ခြင်းအတွက် Botox ကုထုံး - Hello Sayarwon
လေဖြတ်ခြင်းအတွက် Botox ကုထုံး
Botox ကိုတော့ လူအတော်များများ ကြားဖူးနားဝရှိပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Botox လို့ ကြားလိုက်တာနဲ့ အလှအပရေးရာ ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှု၊ အသားအရေ၊ အရေးအကြောင်း စတာတွေကိုသာ ပြေးမြင်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ Botox ရဲ့ အသုံးဝင်ပုံကို ဖော်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ Botox ဆိုတာ botulinum toxin type A အမျိုးအစား အဆိပ်တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ Botox ကို တချို့က miracle poison လို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ်။ ၎င်းကို Clostridium botulinum အမည်ရှိ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားက ထုတ်လုပ်ပြီး အန္တရာယ်အရှိဆုံး အဆိပ်တစ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လူကိုသေစေနိုင်လောက်တဲ့ ဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့ အစာအဆိပ်သင့်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အဆိပ်ဟာ Botox ပါပဲ။
Botox ကို ပါးရေတွန့်ခြင်းအပါအဝင် မျက်နှာ၊ မေးစေ့၊ လည်ပင်းနဲ့ ရင်ဘတ်က အရေးအကြောင်းများကို ပျောက်ကင်းစေဖို့ အလှအပရေးရာအတွက် အသုံးပြုကြသလို အချို့သော ကျန်းမာရေးပြဿနာများကို ကုသရာမှာလည်း အသုံးပြုကြတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Botox ရဲ့ အာနိသင်ဟာ ကြာရှည်မခံပေမယ့် အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး အချိန်တိုအတွင်း ထူးခြားမှုကို လက်တွေ့မြင်ရတဲ့အတွက် လူအများက နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အသုံးပြုနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Botox ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်၊ နို့တိုက်မိခင်တွေနဲ့ ယခင်က botulinum အဆိပ်ကို ဓါတ်မတည့်တုံ့ပြန်မှု ဖြစ်ဖူးသူတွေ အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။
Botox ဟာ လေဖြတ်ထားတဲ့ လူနာတွေအတွက် ဘယ်လိုအသုံးဝင်သလဲ
Botox ကို လေဖြတ်ထားတဲ့လူနာတွေမှာ အသားထိုးဆေးအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Botox ဟာ ကြွက်သားအချို့ကို အကြောသေသွားစေပြီး အချို့အာရုံကြောများကို အလုပ်မလုပ်နိုင်အောင် ဟန့်တားပိတ်ဆို့ပေးပါတယ်။
ဒီအာနိသင်ကြောင့် Botox ဟာ ခန္ဓါကိုယ်တစ်ခြမ်းတောင့်တင်းပြီး ခြေသည်းလက်သည်းညှပ်ခြင်း၊ အဝတ်အစားဝတ်ဆင်ခြင်း၊ မတ်တပ်ရပ်ခြင်း၊ ဟန်ချက်ညီညီလမ်းလျှောက်ခြင်း၊ အိပ်ရာပေါ်လှိမ့်ခြင်း စတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ဆောင်ရွက်ရာမှာ အခက်အခဲတွေ့နေတဲ့ လူနာတွေကို အထောက်အကူပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Botox ရဲ့ အကျိုးအာနိသင်ကို ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်အတွင်း သိသိသာသာတွေ့ရမှာဖြစ်ပေမယ့် ဒီအာနိသင်ကို ကြာကြာခံအောင် ထိန်းထားနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် ရေရှည်အကျိုးရလဒ် ခံစားနိုင်အောင် Botox ကုထုံးကို ကိုယ်ကာယကုထုံးနဲ့တွဲပြီး ခံယူဖို့ သင့်ဆရာဝန်က အကြံပြုကောင်းပြုပါလိမ့်မယ်။ ကုထုံးနှစ်ခု ပူးတွဲခံယူခြင်းအားဖြင့် ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှု ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီး အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်း ပြန်လည်ရရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဆေးခြင်း၊ စာရေးခြင်း၊ စားသောက်ခြင်း စတဲ့ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလည်း ပိုမိုလွယ်ကူချောမွေ့စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Botox ကုထုံးက ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ကုထုံးတစ်ခုလား
မဟုတ်ပါဘူး။ Botox မှာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိသလို ရေရှည်အသုံးပြုဖို့ စိတ်ချရခြင်း ရှိမရှိ သေသေချာချာ မသိရသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Botox ကုထုံးဟာ လူနာများစွာကို ကြွက်သားများပြေလျော့စေပြီး လှုပ်ရှားမှုပိုမိုကောင်းမွန်စေတဲ့အတွက် အသုံးပြုသင့်တဲ့ ကုထုံးတစ်ခုလို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Botox ကြောင့် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော့
အမြင်အာရုံပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း – နှစ်ထပ်မြင်ခြင်း၊ အမြင်အာရုံေဝဝါးခြင်း၊ မျက်ခွံကျခြင်း၊ မျက်သားခြောက်ခြင်း
ဓါတ်မတည့်တုံ့ပြန်မှုများ – အဖုအပိမ့်အနီကွက်များထွက်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်း၊ အသက်ရှူသံရွှီရွှီမြည်ခြင်း
အထက်ပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဟာ ရက်သတ္တပတ် ၃ပတ်အတွင်း အလိုလိုသက်သာသွားနိုင်ပေမယ့် အခြေအနေဆိုးရွားလာမယ် ဒါမှမဟုတ် ဖြစ်ပြီးခဏအတွင်း ပြန်ပျောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းအကြောင်းကြားသင့်ပါတယ်။
Botox ထိုးပြီး အနည်းဆုံး ၁၂နာရီကြာတဲ့အထိ ဆေးထိုးထားတဲ့နေရာကို ပွတ်သပ်ခြင်း မပြုလုပ်သင့်သလို ဆေးထိုးပြီး အနည်းဆုံး ၁နာရီကြာတဲ့အထိ လဲလျောင်းခြင်း မပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။
Botox ဟာ လေဖြတ်ခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာများ ခံစားနေရသူတွေအတွက် ထိရောက်ပြီး စိတ်ချရတဲ့ ကုထုံးတစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပေမယ့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ရှိလာနိုင်တဲ့အတွက် သင့်ဆရာဝန်နဲ့ သေသေချာချာ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးမှသာ အသုံးပြုဖို့ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
Medication guide – Botox. https://www.fda.gov/downloads/drugs/drugsafety/ucm176360.pdf. Accessed April 30, 2017.
Botox. http://www.aocd.org/?page=Botox. Accessed April 30, 2017.
Botulinum Toxin (Botox). http://www.webmd.com/beauty/botulinum-toxin-botox. Accessed April 30, 2017.
Botox. https://medlineplus.gov/botox.html. Accessed April 30, 2017.
Nigam PK, Nigam A. BOTULINUM TOXIN. Indian Journal of Dermatology. 2010;55(1):8-14. doi:10.4103/0019-5154.60343.
Bhakta BB, Cozens JA, Bamford JM, Chamberlain MA. Use of botulinum toxin in stroke patients with severe upper limb spasticity. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry. 1996;61(1):30-35.
Can Botox aid stroke victims?. http://edition.cnn.com/2008/HEALTH/dailydose/11/20/botox.stroke/index.html. Accessed April 30, 2017.
8. Botox Frees Muscles for Stroke Patients in the Know. http://www.nytimes.com/2009/03/24/health/24botox.html. Accessed April 30, 2017.
အိမ်သာအထ မှာ မူးသွားတာ ဘာကြောင့်လဲ။
နေပူထဲသွားပြီး ခေါင်းတွေကိုက် နေပြီလား